Kabtanka Puntland oo loo ogolaaday inuu kasoo muuqdo kulanka berito | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Kabtanka Puntland oo loo ogolaaday inuu kasoo muuqdo kulanka berito
Kabtanka Puntland oo loo ogolaaday inuu kasoo muuqdo kulanka berito
Posted by: radio himilo July 25, 2016
Cabdisalaan Dhiidhiye, waa kabtanka xulka Puntland, waxaana dad badan ay shaki geliyeen in xiddigan uu kasoo muuqan karo kulanka ugu danbeeya cayaaraha gobollada dalka oo berito dhexmari doona xulalka Puntland iyo Jubaland.
Warar soo baxay ayaa tilmaamayay in Cabdisalaan oo ah xiddiga ugu wanaagsan ilaa imminka tartanka gobollada dalka laga reebi doono cayaaraha, xulkiisana laga qaado doono dhibcahii ay ka heleen cayaartii ay waqtiga danbe ka badiyeen Hiiraan/Sh.dhexe.
Sanadkii 2009, xiddigo ku cayaarayay magaca Soomaaliya ayaa magaalada Kampala uga soo qeyb galay tartankii cayaaraha Bariga iyo Bartamaha Afrika, Kabtan Dhiidhiye ayaana kamid ahaa goortaa kooxdii qaranka Soomaaliya ee cayaaraha ka qeyb galay, waana sababta doodda iminka dhalisay.
Xeer hoosaadka tartanka gobollada dalka ee xiriirka kubadda cagtu dejiyeen ayaana dhigaya in aan loo ogoleyn cayaarahaan inuu kasoo muuqdo laacib heerka koowaad ka dheelay, kabtankii Sool hogaaminayay cayaaraha gobollada dalka ee Garoowe ka dhacay ayayna xaajadu dhankiisa u foorarsatay.
Xeer hoosaadka maadaama ay ku xusneyn in cayaaraha laga mamnuucayo laacibkii qaran u baxay, Cabdisalaan Dhiidhiye ayaa weli u sii cayaari doona Puntland maadaama aanu weligii metelin koox ka dheesha horyaalka heerka koowaad ee dalka.
Previous: Dugsi ardayda ka mamnuucay waqtiga farxadda inay sacbiyaan
Next: Hordhaca Finalka cayaaraha gobollada dalka